Bixinta caalamiga ah: hel Huawei Mate 9 oo bilaash ah | Androidsis
Waxaan usbuucii ku bilownay sida ugu wanaagsan uguna macquulsan, annaga oo ku wargelinay akhristayaashayada sida ay u awoodaan mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee casriga ah ee Android bilaash ku hel hadda la heli karo, Huawei Mate 9.
Sida toddobaad kasta, ragga ka socda Android Authority waxay bilaabeen lacag bixin caalami ah oo cusub. Iyo markan waxaad ka heli kartaa Huawei Mate 9, Smartphone la yaab leh. Marka haddii aad ku jeceshahay terminal-kan, ama aad dooneysid inaad ku beddelato mobilkaagii hore mid cusub, waxa keliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad raacdaa talaabooyinka aan hoosta kuugu sheegayno, oo ugu yeer nasiibkaaga.
1 A Huawei Mate 9 ayaa adiga kuu noqon kara wejiga!
2 Xaaladaha Bixinta
A Huawei Mate 9 ayaa adiga kuu noqon kara wejiga!
Waqtigan xaadirka ah Huawei waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta taleefannada casriga ah ee Shiinaha, waa mid ka mid ah shirkadaha leh saadaasha caalamiga ah ee ugu weyn, sida ay qabaan falanqeeyayaasha, sannadka 2020 waxay horay uga sii gudbi lahayd labada shirkadood ee ugu waaweyn waaxda, Apple iyo Samsung. Inta ay daqiiqadaasi timaaddo, Huawei waxay sii wadaysaa inay shaqadeeda sifiican u qabato, tusaale fiicanna kani waa Huawei Mate 9 oo aad qaadan karto gabi ahaanba waa bilaash.
Kuwa aan aqoon, Huawei Mate 9 waxay leeyihiin a 5,9 inch screen oo gudaha gudaheeda waxaa ku yaal xoog badan Kirin 960 processor wada saaridda gaar ah la 4 GB ee RAM iyo deeqsi 4.000 mAh baytariga taasi waxay ballanqaadaysaa inay socon doonto in ka badan hal maalin oo adeegsi ah oo lagu qaado hal dambi in kastoo, sidaad horeyba u ogayd, tani marwalba ay aad isugu dhowdahay. Laakiin shaki la'aan, muuqaalka ugu badan ee ka hadlaya Mate 9 waa qaabeyntiisa kamarad labajibaaran in kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan sawiro cajiib ah. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato faahfaahinta, astaamaha iyo shaqooyinka Huawei Mat 9, waad akhrin kartaa falanqayntaan oo dhameystiran waxaa sameeyay saaxiibkeen Alfonso de Frutos. Dhanka kale, iskuday nasiibkaaga si aad u aragto haddii aad heshay terminalka ciyaarta ku jira.
Toddobaadkan Hay'adda Android waxay siineysaa Huawei Mate 9 xushmadda Matxafka Huawei. Booqo bogga wax bixinta waxaadna kaheli doontaa saamiyo badan oo aad kuwadaagi karto Facebook, Twitter, iyo wixii lamid ah. Intaa waxaa dheer, waxaad yeelan doontaa 6 saami dheeri ah haddii aad ku biirto kooxda Huawei Museum Facebook.
Waxaad haysataa usbuuca oo dhan inaad sifiican ugaqaybqaadato isku aadka ayaa xirmi doona Sabtida soo socota 23:59 pm EST hase yeeshee, ha uga tegin daqiiqadda ugu dambeysa.
Sida ay soo warisay Maamulka Android, kuwani waa Huawei Mate 9 shuruudaha iyo xaaladaha bixinta Isbuucaan:
Waa a isku aadka caalamiga ah Marka laga reebo in sheyga aan loo soo rari karin dalkaaga.
Haddii ay dhacdo in Mate Huawei 9 aan la geeyey kartaa inaad dalkaagii, waxaa laguu magdhow doonaa kaarka hadiyadda ah qiimo u dhigma in terminal dhuray.
Maamulka Android wuxuu ku dhawaaqayaa "Masuul kama nihin shixnadaha lumay"
Waxay sidoo kale tilmaamaysaa inaysan iyagu mas'uul ka ahayn waxyeelada suurtagalka ah ee alaabtu ku yeelan karto inta lagu jiro rarka.
El Ku guuleystaha abaalmarinta waa inuu noqdaa da'da sharciga wadanka aad dagantahay
Kuwa mas'uulka ka ah raafku mas'uul kama aha kharashaadka suurtagalka ah ama khidmadaha kastamka ee laga yaabo inay ku dhacdo soo dhaweynta terminal-ka qofka ku guuleysta rafcaanka.
Kaliya hal gelitaan qofkiiba ayaa loo oggol yahay isku aadka sidaas darteed ka qaybgalayaashu waa in aan ka qayb cinwaanada email kala duwan. Ku guuleystayaasha dib ayaa loo eegi doonaa oo haddii la ogaado in isla qofka uu kaqaybqaatay dhowr cinwaanno emayl ah, waa laga yaabaa in laga qaado. Xusuusnow in aad u hesho Mate Huawei 9 waa in aad siisaa xogta dhabta ah. Ha ciyaarin.
"Waxaan leenahay dhammaan xuquuqda in ay sameeyaan wax isbedel ah giveaway this" (Authority Android)
Sawirkaan waxaa fuliya websaydhka Maamulka Android, oo mas'uul ka ah.
Ha iloobin in isku aadka AANAY fulin annaga, laakiin ay sameeyeen Maamulka Android iyo Matxafka Huawei; Laga soo bilaabo Androidsis waxaan si fudud kuugu wargalinaynaa jiritaankeeda si aad fursad ugu hesho kaqeybgalka, sikastaba xiriir kama lihin ololaha ama kuwa mas'uulka ka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » Bixinta caalamiga ah: hel Huawei Mate 9 oo bilaash ah
Waxaan kaqeyb galayaa Tartankan Weyn!
Sideed uga qeyb qaadan kartaa tartanka?
Jawaab Ruth del Rosal
Astaantu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican waqtigan la joogo waxaan ogahay in saaxiibka Huawei P9 uu yahay mid aad u fiican, waxaanan lahaan jiray boosteejooyinkan, waana kuwo tayo fiican leh oo dhammaaday
Ku jawaab gilberto cardona garcia
Waa maxay gabal abaalmarin ah !!!!
Waxaan horeyba u haystay Huawei oo i siisay adeeg aad u wanaagsan waxaana jeclaan lahaa inaan helo mid cusub.
Jawaab Arcelia Sotomayor Ruiz
Waxaan haystaa lammaane Huawei ah 9. Waan jeclahay! Wanaagsan, waligey kamaan xiiseynin taleefan kasta oo taleefan ah laakiin kani waa fajac aan caadi ahayn, oo aad u dhameystiran. Runtii waan u hambalyeynayaa Huawei !! Waxaan rabaa inaan isdiiwaangaliyo maxaa yeelay waan tuuray oo waxaan ku dhuftay dharbaaxo aad u xoog badan shaashaduna way jabtay, (waxaan doonayay inaan dhinto) halkan ma helayo bedel hadda. Mahadsanid !!
MA HELI USHUAIA HUAWEI MATE 9 Telefoonka gacanta, Aniga ahaan waa taleefankii ugu fiicnaa uguna fiicnaa, sumad aad u wanaagsan, laakiin nasiib daro jasiiraddan lama heli karo, mahadsanid
Jawaab Ines Raquel Alterach
Welinton Pena Ventura dijo
Waxaan hayaa Huawei Mate 9 oo hadda wax waliba si fiican ayey u socdaan waxaan ku noolahay khibrad lama ilaawaan ah taleefankan
Aniga ahaan way ka fiican tahay koox kasta oo kale waxaan haystay iPhone 7 oo lagu daray waxaanan u iibiyey inaan ku iibsado huawei mate 9 haddii aan jeclaan lahaa inaan noqdo guuleystaha sii deyntaas si aan u siiyo saaxiibaday
Jawaab Welinton Peña Ventura
Waxaan rabaaoooo !!! Aan aragno haddii aan nasiib leeyahay !!!
Ku jawaab Cristina prado gonzalez
Wuxuu kaqeybqaatay isku aadkaan weyn, waxaan rajeynayaa inuu i taabto maxaa yeelay waxaan ubaahanahay inaan badalo moobilkeyga.
Jawaab Rubén Herraez Navas
Waxaan kaqeybqaataa oo aan laqaybsadaa RRSS-kayga
Ku jawaab Encarnacion
Waxaan kaqeyb qaadanayaa rafcaanka, dhammaan talaabooyinka la sameeyay mahadsanid fursadda.
Jawaab Adriana Bugarin Pereira